Arsenal Oo Ka Jawaabtay Dalab Aston Villa Kasoo Gudbisay Smith Rowe - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaArsenal Oo Ka Jawaabtay Dalab Aston Villa Kasoo Gudbisay Smith Rowe
Arsenal Oo Ka Jawaabtay Dalab Aston Villa Kasoo Gudbisay Smith Rowe
June 28, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga 0
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ka jawaabtay dalab uga yimid Aston Villa oo ka doonaysay laacibka khadka dhexe ee Emile Smith Rowe, kaas oo ay u qorshaysanaysay inay ku beddesho booska uu bannaynayo Jack Grealish oo la filayo inuu u wareego Manchester City.
Aston Villa ayaa ku jirta suuqa iibka ciyaartoyda iyadoo raadinaysa ciyaartoy khadka dhexe ah oo wanaagsan oo buuxin kara booska uu ku bannaynayo kabtankeeda Grealish oo £100 milyan oo Gini ay dul-dhigtay Man City, lana sheegay in heshiis shaqsi ah ay la gaadhay oo kaliya la sugayo inta uu soo dhamaanayo tartanka qaramada Yurub.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, Aston Villa ayaa gaadhsiisay Arsenal dalab xambaarsan £30 milyan oo Gini oo iskugu jira £25 milyan oo qaddin ah iyo £5 milyan oo dheeraad ah oo dib laga bixin doono, halka ay iyaguna doonayaan inay qaataan kubbad-sameeyaha da’da yar ee Smith Rowe.
20 jirkan oo aan wali ogolaanin inuu heshiis cusub u saxeexo Arsenal iyadoo qandaraaskiisa horena ay ka hadhsan yihiin laba sannadood oo kaliya ayaa ay Gunners ka walaacsan tahay mustaqbalkiisa, laakiin haddana waxay diidmo degdeg ah kaga jawaabtay dalabka Aston Villa.
Arsenal oo uu ka tegay Martin Odegaard oo dib ugu laabtay Real Madrid oo uu amaah kaga maqnaa xilli ciyaareedka hore, ayaa waxay naawilaysaa in Smith Rowe uu ugu dambaynta saxeexi doono heshiis cusub.
Laakiin dhinaca kale isma dhiganayso, waxaanay doonaysaa inay lasoo saxeexato laacibka khadka dhexe uga ciyaara Norwich City ee Emi Buendia.